Home » My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၅ (အပိုင်း – ၂)
နောက်တခါအထိဆိုရင်.. ဒေါ်စုအသက်.. ၇၅…
ဒီ အမျိုးသမီးကြီး မှ မရှိရင် တိုင်းပြည် မကောင်းနိုင်တော့ ဘူးလား လို့ မေးကြ တဲ့ သူ တွေ အများသား သူကြီး ရေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တင်မည့် သမ္မတ
Saturday, 31 October 2015 13:00 Print Email
‘NLD တက်လျှင်’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ‘if’ ဆောင်းပါး ယခင်တစ်ပတ်က ရေးခဲ့ပါသည်။ ယခုတစ်ပတ်တွင် ‘ဦးသိန်းစိန်ကို သမ္မတအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တင်လျှင်’ ဟု မှန်းဆကြည့်မိသည်။
မေမေနိုင်မှ ဖြစ်မည်… အူးခိုင်ကယ်မှ ရှုပ်မည်… Please တိတ်တိတ်နေ။
.ကျေးဇူးကြီးပါ သူကြီးမင်း။ :-))
မနေ့က ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့နေရာနားမှာ VOA က လာထိုင်တယ် . . . ပြီးတော့ အနားကသူတွေကို ဘာကြောင့် NLD ကို မဲပေးမှာလဲလို့ မေးတယ် . . . ကိုယ်လည်းဖြေလိုက်တယ် . . .ဖုန်းဗီဒီယိုလေးနဲ့ ရိုက်တာဆိုတော့ အသံတွေ အကုန်ကြားရပါ့မလားတော့ မသိဘူး . . . ကိုယ်ကတော့ နှစ်ခါလောက် ပြန်ဖြေပေးလိုက်တယ် . . .
Well said Thamee. :-))))